2 ဝါယာကြိုး3ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး2ဝါယာကြိုး3ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုး - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တိုးချဲ့မှု ကြိုး > ဂျပန် တိုးချဲ့မှု ကြိုး >2ဝါယာကြိုး3ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုး
2 ဝါယာကြိုး3ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ငါတို့ ထောက်ပံ့ရေး2ဝါယာကြိုး3ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုး ၏ မြင့်သည် အရည်အသွေး နှင့် PSE, ဂျက် ခွင့်ပြုချက်။ ငါတို့ ကျိန်စာ ကိုကို သို့ တိုးချဲ့မှု ကြိုး အများကြီး နှစ်ပေါင်းဖုံးအုပ် အများဆုံး ၏ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် စျေးကွက်။ ငါတို့ ဖြစ်ကြသည် မျှော်လင့်ပါတယ် သို့ ဖြစ်လာသည် မင်းရဲ့ ရေရှည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွင် Chတွင်a.
2 Wire3Outlet တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ၏ 1.Product နိဒါန်း
တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး စိတ်ကြိုက်နှင့် Standard တိုးချဲ့ကြိုးကြိုး၊ တိုးချဲ့ပါဝါကြိုး၊ extension socket၊ အပြင်ဘက်ကြိုးတိုးချဲ့ကြိုး၊ အတွင်းပိုင်း၊ GFCI ဖြင့်တိုးချဲ့ကေဘယ်လ်၊ နိုင်ငံတကာဘေးကင်းလုံခြုံမှုခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထွက်ပေါက်ကြိုး၊ Rohs complian ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များ - မြောက်အမေရိက UL cUL တိုးချဲ့ခြင်းကြိုးများ၊ ဥရောပ VDE / GS / CE၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီတိုးချဲ့ကြိုးများ၊
၂။ Wire3Outlet တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ၏ ၂။ ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
2 ဝါယာကြိုး Plug JIS 8303 တစ် ဦး က plug ကိုရိုက်ထည့်ပါ
2 ဝါယာကြိုး 3- ထွက်ပေါက် Socket
လက်ရှိ / ဗို့အားသတ်မှတ်ခဲ့
2 ထမ်းဘိုးတို့ကို2ဝါယာကြိုး
5 မီတာ, 10 မီတာ, 20 မီတာ, ထုံးစံအရှည်
PVC,ရော်ဘာ, TPE, အထည်အလိပ်
3.Product Feature And Application of the2Wire3Outlet တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
တိုးချဲ့ခြင်းကြိုးs with PSE certifications are manufactured to the Japan standard, locking type, standard plugs, sockets as Japan extension cords, extension cable,PSE တိုးချဲ့ခြင်းကြိုးs, Outdoor တိုးချဲ့ခြင်းကြိုးs, Waterproof Extension cords,Three Outlet all with Rohs and Reach compliant.
4. Production Details of the2Wire3Outlet တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်ပြီးပြည့်စုံသောဂျပန်ထုတ်ကုန်တွင်ပါဝါပင့်ကူကွက်များ၊ RCD GFCI ပုံးဝင်ပေါက်များ၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောနေရာများ၊ အပေါက်များ၊ ထွက်ပေါက်ပါဝါ stripss များ၊ power supply ကြိုးများ၊ ။ Japan လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် power ကြိုးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
5.Product Qualification of the2Wire3Outlet တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
လက်မှတ်: PSE, JET
6.Deliver, Shipping And Serving of the2Wire3Outlet တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
hot Tags::2ဝါယာကြိုး3ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း
1-15P ယူအက်စ်အေ ပါဝါ ကြိုး
အမေရိက ul လက်မှတ်ရ ယူအက်စ်အေ ပါဝါ ကြိုး
ပါဝါ ထောက်ပံ့ရေး ကြိုး ပလပ် Cable